Angase angadlali oweSundowns egcina izinto zebandla lakwaShembe | isiZulu
AbaseBuhleni bazophenya 'ngokubulawa' kweNkosi uVela Shembe
EZINGENAYO: Ingamampunge eyokukhothama kweNkosi uVela Shembe
Johannesburg - IMamelodi Sundowns isikuqinisekisile ukuthi umdlali wayo, uSiyanda ‘Jojo’ Zwane, maningi amathuba okuthi angadlali emdlalweni wangeSonto weCAF Champions League uma ngabe leli qembu selitholene phezulu ne-AS Vita njengoba esesebhandeni.
UZwane - nobesanda kuvuselela inkontileka yakhe neqembu - ukhonza ebandleni iNazareth Baptist Church, kubika iKickOff.com.
"USiyanda Zwane usebhandeni ngezizathu zezenkolo," kusho umqeqeshi weSundowns, uPitso Mosimane, nobesanda kubhekana nesimo esicishe sifane ngabadlali bakhe ababili, uBangaly Soumahoro kanye noFares Hachi.
Laba dlali bobabili bakholwa ngokwenkolo yamaSulumane kanti kuye kwadingeka ukuthi babe sebhandeni inyanga yonke njengengxenye yomgubho wenyanga engcwele, IRamadan.
OLUNYE UDABA: Umdlali webhola ushaywe yizulu washonela enkundleni
Omunye umdlali okulindeleke ukuba angabi khona kulo mdlalo, uTiyani Mabunda, njengoba esalimele, kanti ngakolunye uhlangothi uWayne Arendse yena kulindeleke ukuthi abuyele ensimini njengoba eseqalile ukuziqeqesha ngokuphelele.
UMosimane kulindeleke afake isikwati esiqinile kulo mdlalo yize noma leli qembu selivele lidlulele emzuliswaneni wama-quarter-finals.
ISundowns izotholana phezulu ne-AS Vita ngeSonto kusihlwa (19:00) emdlalweni wayo wokugcina weqoqo enkundleni yezemidlalo iLucas Moripe Stadium.